စိတ်ကူးဖဲရိုက် (၁) – Food Corner | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » စိတ်ကူးဖဲရိုက် (၁) – Food Corner	36
စိတ်ကူးဖဲရိုက် (၁) – Food Corner
Posted by ဇီဇီ on Aug 12, 2015 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, Ideas & Plans, Society & Lifestyle | 36 comments
မိုးသူ က စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက် အကြောင်းလေး ပြောတော့ ဖတ်ပြီး
ကိုကိုကျောက် ရဲ့ ကော်မန့် ပါ တွေ့လိုက် အပြီး မှာ ကိုယ့် စိတ်ကူးလေး အကြောင်းလည်း ပြောချင်သားးး
ထမင်းဆိုင် ပို့(စ) စစချင်းမှာလည်း ပြောဖူးရဲ့။ စားသောက်ဆိုင် အသေးစား တစ်နိုင်လေး ဖွင့်ချင်ခဲ့တာ။
ပထမ တစ်ခုက ဟင်းစပ် တည့် တဲ့ ဟင်းတွေ တစ်ရက် တစ်စုံ ပဲ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မျိုးးး
ထမင်းဆိုင်တွေ ဖတ်ဖူးရင်တော့ မြင်မှာပါ။
ပိုက်ဆံ ပုံမှန် ဝင်တဲ့၊ ငွေကို ငွေနဲ့ ခိုင်းနိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုများ ခိုင်ခိုင်မာမာရှိခဲ့ရင် အစားအသောက် ဆိုင်လေးကို အမြတ်မစဉ်းစားပဲ စိတ်ကူးရှိသလောက် လုပ်ချင်ရဲ့။
နောက်တစ်မျိုးက မုန့်ဆိုင်သီးသန့်ကို ဖွင့်ချင်တာရယ်။
နေရာ တစ်ခုမှာ မုန့်ဆိုင်တန်းး ဆိုင်ခန်းလေးတွေ ပေးပြီး မြန်မာ အစားအသောက် ရောင်းချင်တာ။
မုန့်မျိုးစုံ အတွက် အသည်မျိုးစုံ ရှိမယ်။
နေရာထိုင်ခင်းရဲ့အပြင်အဆင် နဲ့ သန့်ရှင်းရေးကို ကိုယ်က တာဝန်ယူမယ်။
အစားအသောက်အတွက် သန့်ရှင်းမှုကို ရောင်းသူက တာဝန်ယူ အဲလိုမျိုးလေး….
ဒီ နေရာကို လာတာနဲ့ မြန်မာမုန့်တွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အရသာရှိရှိ စားလို့ ရတဲ့ One-Stop Service ရအောင် ပေးချင်သေးတာ။
မြန်မာ အချိုပွဲ ရာသီစာမုန့်တွေ ရှိမယ်။
ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့်တွေ…
သစ်သီးသစ်ဆံ နဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့်တွေ…
ဒေသတစ်ခုတစ်ခုမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ မုန့်တွေ…. စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ဆိုင် တွေ ကိုလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းကလွဲပြီး အပို အလှဆင် ပစ်စည်းတွေမထားဘူးရယ်။
မုန့်စာရင်းကလည်း လက်ထဲ ရှိပြီးသားး၊ ဒေသစာ၊ ရာသီစာတွေလည်း စဉ်းစားပြီးသားး
အဲ။ အထပျင်းနေလို့သာ။ လုပ်ရင်လည်း ပုံသေမသွားချင်၊ အပြောင်းအလဲနဲ့မှ လုပ်ချင်တာ ဆိုတော့ အပြောင်းအလဲကို လက်ခံမဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်အူးမှ။
နောက်တစ်မျိုး အတွက် တော့ ခြံလေး ရချင်တယ်။ ရမှ ဖြစ်မယ်။ စိုက်ပျိုးမြေ ကောင်းတဲ့ ခြံလေးပေါ့။
ဟို တစ်ပတ်က ပြောခဲ့တဲ့ ဘူး၊ ဖရုံ၊ သခွါး၊ ကြက်ဟင်းခါး၊ ဂေါ်ရခါး၊ ခဝဲ၊ ကင်းပုံ တို့ ကို စင် နဲ့ တင်ထားမယ်။
သုံးချင်တာက အလူမီနီယမ် တန်းတွေ နဲ့ စင်ထိုးချင်တယ်။
အဲ … အဲဒီ စင် အမြင့်ရဲ့ အောက်မှာ မှ သစ်သား စားပွဲ နဲ့ ခွေးခြေ အပုလေးတွေနဲ့ အကြော် ဆိုင်ဖွင့်ချင်တာ။
အပေါ်က အမှုံအမွှား အကောင် မကျအောင် ကာကွယ်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းက အသေးစိတ် ခေါင်းထဲ ရှိတယ်။
ကိုယ်က အဲဒီ နွယ်ပင်က ဆိတ်တို့ ကောင်တွေ ကို ကြောက်တယ်ရယ်။
ဘာ အကြော်တွေ ရနိုင်မတုန်း ဆို…….
စသည်ဖြင့် နဲ့ အချဉ်ရည် ကောင်းကောင်း၊ ရေနွေးကြမ်း ကောင်းကောင်း ရတဲ့ ဆိုင်မျိုးး၊ မှာ လိုက်မှ ဆီသန့်သန့်နဲ့ ကြော်တာမျိုးလေ။
ကြော်နည်းတွေ ဖတ်ချင်ရင် အောင်မိုးသူရဲ့ ဒီ ပို့(စ) ဖတ်။
ကောင်းကောင်းစားကြမယ် မြန်မာ့ရိုးရာအကြော်စုံ နဲ့ အချဉ်ရည်ကောင်းကောင်း
စိတ်နောက်ကို လူနဲ့ ပိုက်ဆံ မလိုက်နိုင်သေးလို့။
စိတ်ကူး (၂) ကို နောက်တစ်ပတ်မှ ပြောပြအူးမယ်။
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ… ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်…
မယ်ချွိရဲ့ဆိုင်ဘေးမှာ ကျောက်စ်ရဲ့ One-stop ဘုံဆိုင် & Bar ဖွင့်မယ်…
ခြံထဲက အသီးအနှံတွေနဲ့ ဝိုင်ဖောက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဂလုလို့ရမယ်…
ပြီးရင် အသားငါးမျိုးစုံကိုလည်း ကင်ပြီးရောင်းဦးမှာ…
မွေးသဖခင်ကတော့ ခန္ဓာမစဲခင် အမှာတော်ရှိဖူးတယ်…
“ငါ့သား လူကလေး… မင်း စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း မလုပ်နဲ့” တဲ့…
“မြတ်မှာလည်းမဟုတ် … မင်းပဲ အသေစောမှာ” တဲ့ … အားဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟီးဟီးဟီးးး
အဲလိုသာဖွင့် ဆိုင်တွေ အရင်းပြုတ်ပြီး လူတွေ ဝတုတ်ပိုဖြစ်မှာ။
kai says: ယူအက်စ်မှာ.. စာဖိုမှုးပြဿနာတက်နေတယ်…။
အရင်နှစ်တွေက…. ဆိုင်၁ဆိုင်ဖွင့်.. အလုပ်ခေါ်ရင်စားဖိုမှုး၇ ယောက်လာလျှောက်သတဲ့…
ဆိုင် ၇ဆိုင်ဖွင့်.. စာဖိုမှုးတယောက်ပဲ…လာလျှောက်သတဲ့…
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာဗျာ။
စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တယ် ဆိုတာ ချက်တတ်တာထက် စားတတ်သူက ဦးစီးဖွင့်တာပိုကောင်းတာ။
black chaw says: တကယ်တော့ လူတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်တတ် ကြပါတယ်ဗျာ…။
ဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှု နဲ့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှု ဆိုတာမျိုးတော့
ခင်ဇော်ကြီး ရဲ့ စိတ်ကူးဖဲရိုက် (၁) ကတော့
ဖြစ်နိုင်သော စိတ်ကူးယဉ်မှု အမျိုးအစားထဲမှာ ပါပါတယ်…။
စိတ်ကူးဖဲရိုက် တဲ့ နေရာမှာ
ဂျိုကာ တက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ.။
အောင် မိုးသူ says:ံခြံလေးတစ်ခြံကတော့ စိတ်ကူးထဲရှိပြီးသား အရိပ်ရတဲ့အပင်ကော သီးပင်ကော ပန်းပင်ကောစိုက်ချင်တာ။ စိတ်ကူးရှိတယ်။ တကယ်လည်း လုပ်မယ် စီစဉ်ထားတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခြံရတောင် သွားနေပြီး မစိုက်နိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ ဘွပါကွယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဇီဇီ ရဲ့ စိတ်ကူးကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တာပဲ။ လူတစ်ယောက်မှာ လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ မလုပ်နိုင်စွမ်းမှာ မလုပ်နိုင်စွမ်းက ပိုကြီးတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မဖြစ်တော့လည်း မလုပ်နိုင်ဘူးမှတ်ပေါ့။
ဖြစ်တော့လည်း လုပ်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ပေါ့။
Mike says: .ငိငိ..တို့လည်းခြံလေးတစ်ခြံပိုင်ချင်တာ…ခုနေခါတော့ မြို့အပြင်ဖက်မှာတောင်ဈေးကမသေးလှ
.ဘာပြောပြော စိတ်ကူးဖဲရိုက်ရင်တစ်အိမ်တော့ဝင်ပါချင်သား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: စားသောက်ဆိုင်တို့ မုန့်ဆိုင်တို့ မြေမလိုပေါင်ဗျာ။
ကြည်ဆောင်း says: ဖောက်သည်တစ်ယောက် ရပြီမှတ်လိုက်နော်
အကြော်ကောင်းကောင်း နဲ့ မြန်မာမုန့်ကောင်းကောင်း စားချင်နေတာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခင်ညာ။
manawphyulay says: မြန်မာမုန့်နှင့် အကြော်စုံပူပူလေး စားချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲ…… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: သားတစ်ယောက် သမီး တစ်ယောက် နဲ့ မနောလေး လာနိုင်တဲ့ အချိန်တော့ ဖြစ်ကောင်းရဲ့ကွယ်။
ဗုံဗုံ says: အဲကွယ်… လူကပြာတာ ဆီပူကလောင်
ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပီး ဘူးသီးတွေကြော်နေမှာ မြင်ယောင်သေး……..
အာ့မျိုးဆို ချစ်တော့ဝူး သွား….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများ က ကြော်မယ် ပေါလို့လားးး
အဖို ဆို မီးဖိုနား မကပ်ဘူးးး
ဗုံဗုံ says: မီး ဂိုဂိုလေးကို အကြော်ခိုင်းနဲ့ နော်
ဘာမှတ်နေရဲ….. ဟွန်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: အကြော်မကြော်ခိုင်းဘူးးး
ညင်းညင်း Was this answer helpful?LikeDislike 12181
Alinsett @ Maung Thura says: အကြော်ထဲမှာ ကောက်ညင်းမပါတာ အကုန်ကြိုက်…
စားဖို့သာ… စိတ်ဝင်စားတာတော့ အနော့် အားနည်းချက်… အဟိ
ဘယ် အကြော်က ကောက်ညှင်းပါလို့တုန်း
Alinsett @ Maung Thura says: မုန့်ဆီကြော်ရယ်…
မုန့်ကြောလိမ်လားမသိ..အာ့ရယ်… အဲ့လိုအကြော်တွေက ကောက်ညှင်းကို ကြိတ်ထားတဲ့ မုန့်နှစ်နဲ့
. ရော ကြော်ရတာလေ..
အာ့မျိုး ကောက်ညှင်းဆန် ရောနေတဲ့ အကြော်ဆိုရင် မကြိုက်တာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့တွေကို ကောက်ညှင်းမုန့် လို့ခေါ်တယ်ကွဲ့
Wow says: ဟိ… စိတ်ကူးယဉ်တာတောင် အစားလေးနဲ့.. တညား က ဒစ်စနေ ကာတွန်းအိမ် ပုံစံမျိုး အပြင်မှာ ဆောက်ပီး နေချင်တာ… ညင့်ညင့်မားမားပဲ စိတ်ကူးတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဝါသနာပါတာက ဒါဆိုတော့
စိတ်ကူးကွန့်မြူးတာလည်း ဒါပဲ ရှိတယ်။
နာ့ စိတ်ကူး ၂ ကျရင် ကြွေသွားမယ်။
ရှယ်ရာ ဝင်ချင်တယ်ဆို ကြိုပြေါ သိလား
ဟေသီ says: မြန်မာမုန့်တွေတော့ မကြိုက်။ သို့သော် အကြော်တို့ ကြိုက်၏။ ဆိုင်ဖွင့်လျှင် ပြောပါ။ အကြွေးလာစားမည် ……
ဇီဇီခင်ဇော် says: လာမည် ကြာမည်။
Ma Ma says: ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် အားပေးမယ့်သူ ရှိပြီးသားလို့သာ မှတ်လိုက်ပေတော့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပိတ်သတ်တွေ များးလာပြီ
naywoon ni says: ​လောကမှာ ဖဲဝိုင်းထဲဝင်​ထိုင်​ပြီး လက်​နဲ့ ဖဲချပ်​ကိုင်​ဖဲရိုက်​ရတာပြီးရင်​ စိတ်​ကူးနဲ့ ဖဲရိုက်​ရတာအ​ကောင်းဆုံးပဲ ။ ကိုယ့်​ဖာသာ ကုလားဖန်​ထိုး ၊ ကိုယ့်​ဖာသာဖဲ​မွှေ ၊ ကိုယ့်​ဖာသာဖဲချိုး ၊ ကိုယ့်​ဖာသာဖဲ​ဝေ စိတ်​ကူးနဲ့ ဆို​တော့ ဖဲချပ်​​တောင်​ ကိုင်​စရာမလို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: စိတ်ကူးးထဲတော့ ဝေပါ ဂျိုကာ ၄ ကောင် နဲ့ တခါတည်းး ဒေါင်းးနေဒါဘဲ
aye.kk says: စိတ်ကူးဖဲရိုက်
ဇီဇီခင်ဇော် says: သများး စီပွားးရေးး လုပ်ခါနီးးရင် တီအေးးဆီ လာတိုင်ပင်အူးးမယ်
Crystalline says: စားသောက်ဆိုင်က သများစိတ်ဝင်စားတယ်..အရင်ကတော့ကိုက်တယ်…ခုချိန်က နေရာငှားခတွေက ခေါင်ခိုက်နေတော့ နည်းနည်းတော့ စားရမလားပဲ…
အစားစုံရတဲ့ နေရာလေးတွေသဘောကျပါ့… အရင်အိမ်နားဖွင့်တဲ့အိုင်တီမှာ.. ဒေါ်ငယ်ကော်ပြန့်အသားလိပ်..မြောင်းမြမွင်းခါး..အဲ့လိုကောင်တာစုံ ၁၀ခုလောက်ရှိတာ.. အခုတော့ Feel ပဲပြေးရတော့တယ်..သူကလည်းပိုစုံတယ်လေ
ဇီဇီခင်ဇော် says: တစ်ဆိုင်တည်းမှာ အဲလို အစုံ ရရင်လည်း အရသာမှာ လျော့လျဲမှာ စိုးတယ်။
မြန်မာမုန့် ဈေးတန်း ပွဲဈေးတန်းလိုမျိုးကို ပိုသန့်ရှင်း တဲ့ ဝန်းကျင်လိုလေး ဖန်တီးချင်တာတာ။